Colchagua Valley Montes Folly Syrah 2017 Wine (TW60097) ~ ICT.com.mm
HomeColchagua Valley Montes Folly Syrah 2017 Wine (TW60097)
Colchagua Valley Montes Folly Syrah 2017 Wine (TW60097)
Country: Chile Region: Apalta Wine Style: Red-Bold and Structured Vintage: 2017 Grape/Blend: Syrah Alc: 14.5% Acid: 3,5 g/L Residual sugar: 3,25 g/L ချီလီနိုင်ငံရဲ့ ကမ္ဘာကျော် ဝိုင်တံဆိပ်ဖြစ်တဲ့ Montes မှ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Colchagua Valley Montes Folly... [Learn more]
Acid: 3,5 g/L
Residual sugar: 3,25 g/L
ချီလီနိုင်ငံရဲ့ ကမ္ဘာကျော် ဝိုင်တံဆိပ်ဖြစ်တဲ့ Montes မှ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Colchagua Valley Montes Folly Syrah (2017) ဝိုင် ဖြစ်ပါတယ်။ ဝိုင်နီတွေကို အများဆုံးထုတ်လုပ်တဲ့ ချီလီနိုင်ငံ၊ Colchagua Valley ၊ Apalta ဒေသမှာ စိုက်ပျိုးထားတဲ့ ဝိုင်စပျစ်စိုက်ခင်းတွေကနေ ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး အဓိကကုန်ကြမ်းအနေနဲ့ ပြင်သစ်မျိုးရင်း ဝိုင်နီစပျစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ အခွံအနက်ရောင်ရှိ ‘Syrah’ စပျစ်သီးတွေကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ Alcohol ပါဝင်မှု 14.5% ရှိပြီး Red-Bold and Structured ဝိုင်အမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။ အမဲသားဟင်းလျာနဲ့ တောကောင်သားဟင်းလျာအမျိုးမျိုးတို့ဖြင့် တွဲဖက်သုံးဆောင်လေ့ရှိတဲ့ နာမည်ကျော်ချီလီဝိုင်နီ ဖြစ်ပါတယ်။
Montes Folly Syrah 2017 Wine
Montes Folly hasagenerous, deep intense ruby red color. On the nose the wine is very elegant with lively black ripe fruit, hints of dark chocolate andasubtle toastiness. On the mouth, the wine is robust, concentrated, velvety and dense. Tobacco and vanilla notes arrive on the finish. In all ways,aunique wine that has becomeacult wine.